Xildhibaan hore oo dowladda Puntland ku dhaliilay go’aanka ay ku xirayso marsada Kalluumaysiga ee Boosaso – Kalfadhi
March 4, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Mudane Maxamed Axmed Jaceel oo ka mid ahaa golihii dhowaan dhacay ee wakiillada Puntland oo laga soo dooran jiray gobolka Bari ayaa xukuumadda ku dhaliilay go’aan ay shalay soo saartay, kaas oo lagu xiray marsadii kalluumaysiga ee dekedda Boosaso.
Xildhibaankan hore wuxuu dowladda ku dhaliilay go’aankaas, isagoo ku tilmaamay mid aan laga fiirsan. Waxay ahayd buu yiri in kalluumaysatada la siiyo wakhti ay ku guuraan loona diyaariyo meeshii ay degi lahaayeen.
Mudane Jeceel wuxuu sheegay in go’aankaas uu si adag u taabanayo nolosha dadka kalluumaysatada ah oo u badan danyar ku tiirsan Badda isla markaasna halis u geliya naftooda in ay noolaadaan.
Wasaaradda Dekedaha Puntland ayaa warqadda ay ku amartay in marsada la xiro waxay ugu jeedisay wasaaradda Kalluumaysiga in ay si deg deg ah ku diyaariso suuqyadii iyo kawaanadii ay u guuri lahaayeen kaluumaysatadu ka hor beri oo ah marka marsada la xirayo.
Wararka ay maanta Boosaso ka helayso warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegaya in kalluumaysatada oo ka hadli lahaa go’aankaas loo diiday in ay saxaafaddu waraysato, mar ay marsada la xirayo tageen.